‘फेक रेस्क्यू’ प्रकरणः पर्यटन क्षेत्रमा त्रास फैलाउँदै सरकार
काठमाडौं । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित पर्यटन भ्रमण वर्ष मनाउन लागेको सरकारले नै पर्यटन क्षेत्रमा त्रास फैलाउने काम गरिरहेको पर्यटन व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
पर्यटन वर्षको तयारीमा लाग्नुको सट्टा पर्यटन क्षेत्रमा भएका कमजोरीलाई खोजेर त्रास फैलाउन सरकार लागिपरेको उनीहरुको आरोप छ ।
सरकारले ‘फेक रेस्क्यू’ गरेको भन्दै केही कम्पनी र हेलिकप्टरलाई कारबाहीमा सिफारिस गरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा सोचे अनुरुप काम गर्न नसकिनाले एउटा बिरामीको लागि पटक–पटक उडान गर्नुपर्छ । सरकारले भने त्यही एउटा बिरामीको उद्दारको लागि गरिएको पटक–पटकको उडानलाई आधार मानेर ‘फेक रेस्क्यू’ गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको व्यवसायी बताउँछन् ।
इजि हेलि चार्टर सर्भिस प्रा.लि.कम्पनीका अनुसार २०१६ मे १० तारिख ७ हजार २ सय मिटर भन्दामाथि सगरमाथा आरोहणको क्रममा तेस्रो क्याम्पमा फसेका विदेशी नागरिक भलाद्मिर स्र्टाबा र जोल्टन पलको उद्दार गर्दा ५ पटकसम्म उडान भरेर ४८ घण्टा लगाई उद्दार गरिएको थियो ।
त्यसरी पर्यटकको उद्दार गरेर ज्यान बचाउँदा समेत कारबाहीमा परिएकाले अबको दिनमा यसरी उद्दारको काम गर्नेकी÷नगर्ने भन्नेमै अन्यौल रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यसरी नेपाल आउने पर्यटक उद्दार गरेर पर्यटकको ज्यान बचाउने कम्पनीमाथि छानबिन गर्दै कारवाही गराउनु सरकारले व्यवसायमाथि गरेको प्रहारको रुपमा व्यवसायीले लिएका छन् । उद्दारको काम गरेर राज्यमा ल्याएको पैसाको कर तिरे/नतिरेको विषयमा छानबिन गरेर व्यसायीलाई जिम्मेवार बनाउनुको सट्टा व्यसायीलाई निरुत्साहित हुनेगरी कारबाही गराउने गलत रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
व्यवसायीले पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा के गर्न हुनी ? के गर्न नहुनी ? भन्नेबारे राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ । फेक रेस्क्यूको नाम दिएर संसारभर सरकार आफैँ गलत सन्देश फैलाइरहेको छ । सरकार यसरी नै प्रस्तुत हुने हो भने २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सोचेजस्तो सजिलो छैन ।